Izvo zvinoshandiswa zvinogadzirisa zvavakawedzera zvakapfuura | Ehupfumi Zvemari
Vemagetsi vanogadzirisa kukwira kwavo kwekare
Hapana mubvunzo kuti makambani emagetsi anga ari iwo makuru protagonists eSpanish equities mugore rapfuura. Iko chikamu ichi yakakoshesa kutenderedza 15% uye izvo zvakagonesa vatengesi kuti vaite zvinobatsira mashandiro avo neunyanzvi hukuru. Chaizvoizvo mugore umo musika wekutengesa wakavhara gore nemadonhwe e13%. Ndokureva, vatora nzira mbiri dzakasiyana uye izvo zvakakonzera chikamu chakanaka chevashambadziri kuti vatendeudze maziso avo kune ino yakakosha chikamu.
Zvakare mwedzi waJanuary wakave wakasarudzika kumakambani ari muchikamu chemakambani emagetsi, achitora mukana wekutenga kwekutenga mune ese stock exchange pasi rese. Kusvika pamwero wakawanda wemakambani aya akawanikwa mukati nguva dzese-dzakakwira. Iine akakosha chaizvo ongororo mukuchinja kwemitengo yavo. Asi ikozvino zvinoita sekunge nguva yekugadzirisa yasvika, ine njodzi yekuti idzi dzinogona kuve dzakanyanya kwazvo kubva zvino zvichienda mberi. Naizvozvo, chenjera zvikuru nenzvimbo dzako.
Chiitiko chakakosha chaizvo ndicho chakaitika muchikamu chekutengeserana kwemari nemusi weChishanu chapfuura. Iko kunosarudzwa index yeSpanish stock market, iyo Ibex 35, yakakwira ingangoita 2%. Kunze kwega kwega makambani ari muchikamu chemagetsi, uko kunyangwe Endesa yakawa ne1,3%. Nekuda kwekutengesa kwekumanikidza kwakaitika mukuita kune iko kwazvino kuwedzera. Kunyangwe ichiramba ichizivikanwa kana ichingova kururamisa kana zvinopesana pave paine shanduko mune zvinoitika zveiyo chikamu.
1 Magetsi: kugona kwavo kwapera
2 Iyo inodzorwa zvakanyanya chikamu
3 Kutenga kusingagamuchirwe
4 Kukuvadzwa nesarudzo yekumberi
5 Mashura akaipa emhizha
6 Iberdrola akanakisa mune chikamu
Magetsi: kugona kwavo kwapera
Chimwe chezvikonzero chekutsanangura kuita uku nemakambani emagetsi ndechekuti mazhinji acho apedza kugona kwavo kugona mushure mekugadzira yakakosha mombe kumhanya mumwedzi mitatu yekupedzisira. Ndokunge, ivo havasisina kukwezva kune tora zvinzvimbo nemitengo yavanayo parizvino. Hazvishamise kuti vatengesi vari kunongedza mafambiro avo kune mamwe matunhu ane tarisiro iri nani mumakore anotevera.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kuwedzera kwacho hakusi kwekusingaperi uye chero panguva ipi maitiro aya anogona kuchinja. Kusvika padanho rekubata vashoma uye vepakati varimi vane rimwe tsoka. Uye nenzira iyi, unogona kuwana kurasikirwa kukuru kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya kana isu tichifunga nezvekuti makambani ari muchikamu chemagetsi anobva kumatunhu akakwirira kwazvo mumutengo wawo. Izvo, njodzi dzakanyanya kukwirira kupfuura mwedzi mishoma yapfuura.
Iyo inodzorwa zvakanyanya chikamu
Kana makambani ari muchikamu chakakodzera chemari dzenyika anozivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti inodzorwa zvakanyanya. Uye iyo ichangopfuura sarudzo ye enda kunovhota musi waApril 28 izere kusahadzika kumakambani akanyorwa. Kunyanya, kune kusahadzika kunounzwa zvisati zvaitwa nehurumende inotevera yeSpain. Uku ndokumwe kufunga kuri kupihwa nevanoongorora zvemari kuti vatsanangure zviri kunyatsoitika nechikamu chemagetsi. Kunze kwemamwe marudzi ehunyanzvi kutariswa uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Ndichiri pane zvinopesana, pane nyaya yakamirira yeiyo motokari dzemagetsi uye izvo zvinoenderana nemamwe matanho anotorwa nehurumende nyowani. Uku kusahadzika kutsva kunobata makambani ari muchikamu uye izvo zvinogona kutungamira mukudzikira mune aya akakosha maitiro mukati meinosarudzwa indekisi yeSpanish equities. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa iyo yakaipa nguva yeiyo chikamu.
Kune rimwe divi, kutenga kunoitwa nemakambani emagetsi kwakavewo nesimba rekudonha kwemitengo yemakambani emagetsi. Enagás uye Red Eléctrica Española. Nhau idzi hadzina kugamuchirwa zvakanaka nemisika yemari. Iko kunyangwe iyo kambani yeUS S & P Global Ratings yakasimbisa iyo 'A- / A-2' chikwereti ratings yeRed Eléctrica Corporación uye yayo yepasi Red Eléctrica de España (REE), ine 'kugadzikana' maonero, kunyangwe ichifunga kuti iyo yekutora de Hispasat iko kuvhiya kune "yakaoma" nzira yekugadzirisa.
Izvo zvinogona zvakare kunge zvakakonzera shanduko yezvishandiso, izvo mumaminetsi mashoma vatendeuka ndokutanga kuzviita cheka kukoshesa kwemitengo yako. Kusvika pakuti kekutanga kwenguva yakareba zviratidzo zvekutanga zvekutya zvakaonekwa mune vashoma vekunze varimi vane nzvimbo dzakashama mumatanda emakambani aya. Nesimba rekutengesa rekumanikidza pamasheya avo uye izvo zvavasina kurangarira mumwedzi ichangopfuura. Ikozvino kiyi irimo pakuti kufamba uku kuchazodzika kubva zvino zvichienda mberi.
Kukuvadzwa nesarudzo yekumberi
Hazvigone kuti makambani emagetsi ndiwo akanyanya kukanganiswa nekuziviswa kwesarudzo dzinotevera muna Kubvumbi. Mupfungwa iyi, hatikwanise kukanganwa chero zvodii kuti Red Eléctrica, Enagás neEndesa vaive mafemu matatu akabatwa zvakanyanya panguva yechirongwa cheChishanu, vachitungamira kudonha kweIbex 35. Vese vatatu vakavhara musangano nekudonha kwakatenderedza 1,2%, vachiri zvinopesana Naturgy akakwanisa kugadzirisa chiitiko ichi uye kuvhara padiki girini, sezvakaitika naIberdrola.
Izvo zvinogona zvakare kutariswa sechirevo purofiti kuunganidzwa mari isati yawana mari mumazuva ekupedzisira. Iko varimari vakasarudza kunakirwa nezvibereko zvavo vakatarisana nemamiriro ezvinhu matsva anogona kugadzirwa muchikamu chemagetsi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, uye nekure, iri kuve yakaipisisa yezvikamu zvekuenzana kwenyika. Kusvika padanho rekusahadzika kwakawanda kuri kugadzirwa nezve shanduko yaro inotevera mumisika yemari mukati memazuva anotevera kana kunyangwe mwedzi.
Mashura akaipa emhizha
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru izvo zvinofanirwa kutariswa ndezvekuti hazvizove zvakanakisa zvikamu zvemusika wemasheya mukutarisana nemaitiro akanaka mumisika yemitero yenyika. Ehezve, kune vamwe vanogona kupindura nesimba guru kwavari, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vakagamuchira chirango chakakura muzvikamu zvekutengesa zvenguva pfupi yapfuura. Uye saka ivo vane kukoshesa kwakakwirira kugona uye kuti mune dzimwe nguva inofungidzirwa kutenderedza manhamba. Imwe yemapazi aya pasina mubvunzo chikamu chebhengi icho chingabatsire zvakanyanya kubva pakukwira kumusoro kubva kumisika yemari.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti kukura mumakambani emagetsi kunogona kunge kuri padyo nekuneta. Muzviitiko zvese, vari kutengesa pamusoro pemitengo yavo Uye iyi haizi nzira dzakanakisa dzekutora zvinzvimbo mumisika yemari panguva ino. Zvirinani iwe unofanirwa kuzorora kubva kune aya maitiro uye enda kune mamwe masheya zvikamu zvine hukuru hunovimbisa hwekubudirira. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti nenjodzi yakakwira, kunyanya kana misika yemasheya ikaramba kubva ikozvino.
Iberdrola akanakisa mune chikamu
Chero zvazvingaitika, pane kambani inomira nekuremekedza vamwe vayo mubato iri. Izvo ndezve Iberdrola sezvo iri iyo ine yakanyanya nani kukosha neakasiyana emari vamiririri. Mune zvimwe zviitiko, nekutengesa kwekutenga kunyangwe parizvino uchitengesa pamatanho padyo ne 7,20 euros pamugove. Asi zvisinei neizvi, inosanganisirwa mune yekudyara portfolio yechikamu chakanaka chevamiriri vezvemari. Uye zvakare, inopa goverano rekugovera iro rinokwezva kwazvo kune vanoita mari. Negoho rakatenderedza 6% pagore uye rakavimbiswa.
Nepo kune rimwe divi, zano rebhizinesi rekambani yemagetsi iri kukosheswa zvakanyanya nemisika yemari. Kuve imwe yemakambani mune yakasarudzika index yemunyika stock stock iyo inochengetedza yakakwira kutengesa huwandu mumwedzi ichangopfuura. Kunyangwe kumuka kwayo, kune rimwe divi, kungave kwaive kwakanyanya uye zvine musoro kuti iwe unofanirwa kufambisa mafambiro aya kana iwe uchida kuramba uchikoshesa mumwedzi iri kuuya. Chero zvazviri, iyo yakanaka sosi sarudzo kuve yakanyanya kuchengetedzeka mukudyara muzvikwereti.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ikambani iri muchikamu inopa yakanakisa equation pakati payo ingabatsire purofiti pamwe nenjodzi dzinobatanidzwa mukushanda kwayo. Pamusoro pevamwe vakwikwidzi vayo mukati meichi chikamu chakakosha chemari yenyika. Kusvika padanho rekuti ichiri kukwanisa kupa inokwezva kune yekudyara kutora mumazuva mashoma anotevera. Nenguva yekusingaperi iyo yaizoenda kune ipfupi kana yepakati izwi. Kunyangwe, zvakadaro, ivo havafanire kutarisira kudzoserwa kwakanyanya mushure mekupedzisira kumhanya mumusika wemari. Mune imwe nhanho inoenda kubva pa3% kusvika pa8%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Vemagetsi vanogadzirisa kukwira kwavo kwekare
Bankia inosarudza kutsigira zvirongwa zvayo zvepenjeni
Inotsigira uye zvinopesana nekuvhura zvigaro mumusika wemasheya